, အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - Roto အဆိုတော်ခရစ်, La ဤနေရာသို့သွားရန် RSP ပညာရေးမှာသူ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Roto အဆိုတော်ခရစ်, La ဤနေရာသို့သွားရန် RSP ပညာရေးမှာသူ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်
Roto အဆိုတော်ခရစ်, La ဤနေရာသို့သွားရန် RSP ပညာရေးမှာသူ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်
Adelaide, တောင် Australia- Adelaide ဇာတိက Chris, La ရုပ်ရှင်မှော်နှင့်အတူ enamored ကြီးပြင်းလာတယ်။ 2016 အတွက်လူငယ်တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့သူဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခြေရာကောက်အတွက် Sun ကရုပ်ပုံများ '' ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ် Rising အတွက်မအပ်နှံသဖြင့်တစ်ဦးတစ်သက်တာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့မိမိအအရူးအမူးလှည့်ဆီသို့ခြေလှမ်းကိုယူ။ အဆိုပါဆုရအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယို၏ဝုဏ်အတွင်း, ပရိုဂရမ်ကိုလိုအပ်သောရှည်လျားနာရီနဲ့ Hard အလုပ်များများပေါ်ကောက်ယူ, ဒါပေမယ့်သူကအခု Method ကိုစတူဒီယိုမှာ Roto နှင့်သန့်ရှင်း-Up ကိုအဆိုတော်အဖြစ်အသုံးချနေသည်အဖြစ်ခရစ်အဘို့, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုချွတ် paid မဲလ်ဘုန်းမြို့။ အဲဒီမှာသူကလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ရဲ့ box Office ရဲခခြှေဲအပါအဝင် hit ရုပ်ရှင်, တစ်ဦး string ကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်, Aquaman ။
ခရစ်, La မကြာသေးမီကသည်သူ၏ပညာရေးအတွေ့အကြုံနှင့်သူသည်မိမိအလားအလာငယ်ရွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ပျော်မွေ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းကို RSP နှင့်အတူနှုတ်ဆက်လေ၏။
ခရစ်, La: အများအားဖြင့်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရာမှ။ ကြီးစကားလုံးများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ပျံသန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသည့်အခါပာ-ငါခေါင်းစဉ်တွင်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အိမ်မှာသူတို့ကိုထပ်ဖွဖို့ကြိုးစားချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ tinkering ခဲ့သည်။
ခရစ်, La: အဘယ်သူမျှမကျွန်မပထမဦးဆုံးသက်ဆိုင်တဲ့တစ်ခုခုတက္ကသိုလ်သွားဘဲ, ကိုယ်ကမကြိုက်ကြဘူး။ ငါချိုး ယူ. သို့ဖြစ်. အဘယ်သို့ငါစိတ်အားထက်သန်မှုကိုလိုက်နာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ TAFE လုပ် SA မှာ CGI နဲ့ Visual Effects အတွက်2နှစ်အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်း
RSP: ထို RSP ရန်သင့်အားဦးဆောင်?
ခရစ်, La: RSP Adelaide အတွက်ကျော်ကြားသည်နှင့်ဒေသခံကောလိပ်, တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်၏ဒုတိယစာသင်စဉ်အတွင်း TAFE မှာကျောင်းသားများကို RSP သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပြပွဲ reels တင်ပြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသားအဖြစ်ငါတလျှောက် tag ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယိုမှကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ခဲ့နဲ့ကျွန်မအလွန်သဘောကျခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့2နှစ်သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်အခါဒါ, ငါသည် RSP ရဲ့ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်း။
RSP: သင်အထင်ကြီးကြောင်း RSP အကြောင်းကိုဘာလဲ
ခရစ်, La: ဒါဟာဝေးသင့်ထံမှ 15 မီတာအလုပ်လုပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာရှင်တွေနဲ့အမှန်တကယ်စတူဒီယိုပါပဲ။ ကျောင်းသားအတှေ့အကွုံတဲ့ professional လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှညီ။ RSP မှာ, သငျသညျတနင်္လာနေ့9ထံမှ5မှသောကြာနေ့မှတဆင့်ရှိပါတယ်, သင်ကစစ်မှန်တဲ့စတူဒီယိုအတှေ့အကွုံကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ကြသည်နှင့်သင်အချိန်ပြည့်နာရီအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါသင်တန်းပို့ချသင်သည်အလုပ်လုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးရဲ့အရာပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်ပေးပါ။ ဒါဟာသင်ယူဖို့ပိုကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်, La: ငါနေ့-in-the-ဘဝ-၏ကွဲပြားခြားနားသောဌာနများမှအနုပညာရှင်တွေအတွက်လာနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတင်ပြချက်များကိုချစ်၏။ အလွန်သိရှိ။ ငါသည်သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍတချို့၏မကြားဘူး။
RSP: ဒါကြောင့် software ကိုသင်ယူခြင်းထက်ပိုခဲ့တာလဲ
ခရစ်, La: ဟုတ်ပါတယ်, အတိအကျ။ ငါ TAFE ကနေဖွဲ့စည်းမှုဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အကျွမ်းတဝင်ခဲ့ပေမယ့် RSP မှာငါကပိုက်လိုင်းအတွက်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုအလေ့အကျင့်သို့ကြောင့်ဝတ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးထက်ပိုကောင်းစွာ-rounded အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်, ငါ၏ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်ဖြည့်ပြီးနောက်ကျွန်မတိုတောင်းတဲ့စာချုပ်အပေါ် RSP နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ရဖို့ကံကြီးပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ X-Men: ပေါကလစ်။ ငါသည်ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ရတယ်နှင့်တစ်ဦးမှအထောက်အကူ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်! ဒါကအံ့သြဖွယ်ပါပဲ!
ခရစ်, La: RSP နဲ့ငါ့တိုတောင်းသောစစ်မှုထမ်းအပြင်ဒါဟာခဏယူပေမယ့်နည်းလမ်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မိုင်းဟောင်းတစ်ဦးအတန်းဖော်ငါ့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးစကား၌သွင်း ထား. , သူတို့သညျငါ့ကိုအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ခရစ်, La: ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ TV လုပ်ပါ။ ငါ Roto နှင့်သန့်ရှင်း-Up ကိုအဆိုတော်ပေါ့။ ငါ၏အမှုလူများနှင့်တ္ထုန်းကျင်ပုံစံမျိုးစုံဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကူညီပေးဖို့အောင်ပါဝငျသညျ။ ငါသညျလညျးတ္ထု, ထားနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဒါဟာအမြဲကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လက်ျာဘက်ပြုမိသည့်အခါကျေနပ်။
ခရစ်, La: ငါ ... နိုင်ငံတကာမှာလုပ်ကိုင်ဖို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနေဒါချင်ပါတယ်။ သငျသညျခရီးသွားနှင့်အတူအလုပ်ပေါင်းစပ်ချင်လျှင်ဒီကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်, La: သငျသညျပတျဝနျးကငျြရှိလူဦးသိရန်ရယူပါ။ မိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်သွယ်မှုလုပ်ပါ။ သင်အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ကူညီပေးနိုငျတဲ့သူကိုသိဘူး။ သိပ်အလေးအနက်ထားကိုယ့်ကိုကိုယ်ယူမနေပါနဲ့, သင်အရာအားလုံးကိုသိကြမယူဆကြဘူး။ သင်အမြဲသင်ယူမှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
RSP: ထိုအသင်သည်အဘယ်သို့ RSP ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. တစ်ခုအယောင်ဆောင်အနုပညာရှင်ပြောပြပါ့မလား
ခရစ်, La: ဒါဟာစတူဒီယိုဘဝတစ်ခုဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ ဒါဟာဆက်သွယ်မှုစေရန်နှင့်ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အဘဝလျှင်ထွက်ရှာရန်, ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူဖို့နေရာကောင်းတခုပါပဲ။
ပညာရေး ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် Visual Effects	2019-06-17
နောက်တစ်ခု: Dalet နှင့်အတူကို ABS-CBN Expand သတင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ Capability